Kulan lagu daah-furay Dhismaha Waddada laamiga ah ee Degmada Dacarta oo lagu qabtay Hargeysa |
Kulan lagu daah-furay Dhismaha Waddada laamiga ah ee Degmada Dacarta oo lagu qabtay Hargeysa
Hay’adda Faham Service iyo Guddida Horumarinta Talosame oo si wada-jir ah u daah-furay dhismaha Waddo laami ah oo isku-xidhi doonta Hargeysa iyo Degmada Dacarta iyo nuxurka khudbadihii laga jeediyey + sawirro
Hargeysa(GNN)-Kulan lagu daah-furay waddo laami ah oo isku-xidhi doonta Magaalooyinka Hargeysa iyo Dacarta, ayaa lagu qabtay Magaalada Hargeysa, kaasoo ay soo qabanqaabisay Hay’adda Faham Health Service and education oo fadhigeedu yahay dalka Sweden.
Kulankan oo ay ka soo qayb-galeen, Saraakiil ka socda Hay’adda Faham oo fadhigeedu yahay Dalka Sweden, Guddida horumarinta ee Talosame, Ganacsto, aqoonyahan iyo waxgarad ka soo jeeda Degmada Dacarta, ayaa waxa lagaga hadlay sidii loo samayn lahaa jidka Laamiga ah oo dhererkiisu dhan yahay 52KM, Bulshada deegaanka, Dawladda iyo Hay’adduna isaga kaashan lahaayeen dhismaha.
Marwo Khadra Daa’uud Ismaaciil kamid ah Qurbo-jooga Degmadaan ka soo jeeda, kana socotay Hay’adda Faham Health Service, ayaa ku dheeratay muhiimada ay waddooyinku u leeyihiin horumarka Deegaanka iyo Bulshada, waxaanay halkaa kaga yaboohday Qadar lacageed oo ay si shakhsi ah ugaga qayb-qaadanayaan iyada iyo Qoyskeedu dhismaha Waddadaas.
Waxay halkaa ka shaacisay “aniga iyo Odaygu waxaanu bixinaynaa lacag shan kun oo dollar ah oo aanu qoys ahaan ugu deeqnay Wadaddaas. Intaasuun kuma eekaan doonee waxaanu dibad iyo meel walba u maraynaa sidii howshaa waddada aynu ugu guulaysan lahayn” ayey sheegtay Khadra.
Guddoomiyaha Guddida horumarinta Talosame Xaaji Axmed Xaaji Cabdilaahi Abusite oo ku hadlayey Afka Ganacsatada Degmadaas ka soo jeeda, ayaa isna sheegay inay ganacsato ahaan sameynayaan sanduuq ay kaga qayb-qaadanayaan tabarucaadka laamigaas, isagoo intaa ku daray inay Akoon-xisaabeedyo lagu uruurinayo tabarucaadka ay ka furi doonaan Bangiyada Dalka.
Axmed Aw Xuseen Furre oo ah Guddoomiye ku-xigeenka Guddida Talo-same, Sh. Cabdilaahi Ibraahim Yuusuf iyo Eng. Axmed Cabdi Ibraahim iyo xubno kale oo isugu jira waxgarad iyo aqoonyahan, halkaas iyaguna ka hadlay ayaa soo dhaweeyey daah-furka Mashruucan, waxaanay sheegeen inay doorkooda ka qaadan doonaan.
Cabdilaahi Cali Ibraahim iyo Eng. Maxamed oo ku hadlayey Afka Hay’adda Faham Service ayaa iyaguna sheegay inay kaalin mug iyo miisaan leh ka qaadanayaan hir-gelinta Wadaddaas, balse loo baahan yahay inay Bulshada Degmada ka soo jeeda guddo iyo dibadba is abaabulaan oo ay ka qayb-qaataan, si wada-jir iyo Iskaashi loogu hir-geliyo.
Waxa ay intaa ku darreen in gacmo wada-jir wax ku gooyaan, iskaashiga Bulshada oo taaba galaan uu dhaliyo waxqabad iyo horumar muuqda. “annagu horena waanu idiin soo gaadhsiinay farriimo ku saabsan doorka aanu ka qaadanayno annagoo isku duuban, iminkana dal iyo dibad ka fadhiisan mayno” ayuu yidhi Eng. Cabdilaahi Cali Ibraahim.
Guddoomiyaha Degmada Dacarta Eng. Cabdiraxmaan Biinge oo gabagabadii munaasibadaas ka hadlay, ayaa sheegay inay wadaddu lagama maarmaan u tahay horumarinta Kaabeyaasha aasaasiga ah ee Degmada, sidaas darteed ay maamul ahaan iyo Bulsho ahaanba ay farxad weyn u tahay bilowga Olollahan lagu daah-furay dhismaha Jidkaas Caasimada iyo Degmada isku-xidhaya.
Wuxuu sheegay inay dawladdu hore u balanqaaday inay dhismaha wadaddaas qayb libaax ka qaadanayso, lagana sugayo fulinta balanqaadkaas, maamul ahaana ay ka daba-tegayaan.
Guddoomiye Biinge wuxuu intaa ku daray in waddo-xumaanta Degmadu dhibaato ku hayso Bulshada ku dhaqan, isla markaana haddii wadadda la dhiso ay horumarayaan dhamaan adeegyada kale ee aasaasiga ahi.
Guddoomiyaha Degmada Dacartu, waxa kale oo uu sheegay in Hooyada Xaalad Caafimaad la soo deristo marka caasimada loo soo qaado ay dhibaato kala kulanto Jidka Rafka ah ee Gaadhiga lagu soo qaadaa soo maro, sidoo kalena caqabadaha kale ee waddo la’aantu sababtaa intaa ka badan yihiin.
Ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay Dawladda, Ganacsatada, Hay’addaha dalka jooga iyo Qurbo-joogta Somaliland, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Degmadan inay ka qayb-qaataan dhismaha jidkaasi, isagoo si gaar ah Jaaliyaddaha dibada uga dalbaday inay dhismaha Degmada iyo horumarinteeda u soo jeestaan.
Gabagabadii Xafladaas waxa shahaado Sharafyo iyo hadyaddo kale oo ay ku mutaysteen taakulaynta iyo horumarinta Bulshada, lagu guddoonsiiyey Marwo Khadra Daa’uud Ismaaciil, Cabdilaahi Cali Ibraahim iyo Eng. Maxamed oo saddexdooduba ka socday Hay’adda Faham Service oo fadhigeedu yahay dala Sweden.
BorramaProf Axmed Ismaciil Samatar Ayaa Soo dhaweyn Baladhan Loogu Sameeyay…